🥇 Ukubalwa kwezindleko nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 94
Ividiyo yokubalwa kwemali yezindleko nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo
Oda ukubalwa kwezindleko nezinzuzo zomkhiqizo wemfuyo
Ukubalwa kwezindleko kanye nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo kwenziwa ngokuya ngezinhlobo ezivunyiwe zamazinga emibhalo. Imibhalo yehlukile futhi kunezinhlobo zayo eziningi, kufanele kuqashelwe. Ngokwesisekelo sabo, okufakwayo kwenziwa kumarejista ezimali. Ebhizinisini elikhulu lesimanje, le mibhalo kanye namarejista, ikakhulukazi, agcinwa efomu ledijithali. Ekubalweni kwezindleko zemikhiqizo yemfuyo, kunezigaba ezintathu eziyinhloko. Esokuqala sifaka izindleko zemikhiqizo yemfuyo, imikhiqizo yemfuyo eseqedile, isivuno sokuphakelayo, nezinto ezisetshenziswayo, ezisetshenziswa ngokuphelele ezinhlelweni zokukhiqiza. Izindleko ezinjalo zifakiwe kuzinqubo zokubalwa kwemali ngokuya ngemibhalo ehlukahlukene, nama-invoice. Okwesibili kufaka izindleko zezinto zokusebenza, njengezinto zokubala imali, amadivayisi wezobuchwepheshe, ethulwa nakwimibhalo yokubalwa kwezimali. Futhi, ekugcineni, inkampani yenza ukubalwa kwezimali kanye nokuphathwa kwezindleko zomsebenzi ngokusho kwesikhathi, amaholo, ama-oda ahlukahlukene wezinto ezenziwa ngabasebenzi, kanye nabasebenzi. Imibhalo yokubalwa kwezimali kanye nokuphathwa kwesivuno semikhiqizo yemfuyo ifaka phakathi omagazini bokukhishwa kobisi, inzalo yezilwane, esebenza ngokudluliselwa kwezilwane ziye kwelinye iqembu leminyaka, ukusuka ngenxa yokuhlatshwa noma ukufa.
Kungenzeka ukuthi emapulazini amancane wonke lawa marekhodi asagcinwa ephepheni nje. Kodwa-ke, ezinkampanini ezinkulu zemfuyo, lapho imfuyo inenqwaba yezilwane, imigqa yemishini yokusenga nokusatshalaliswa kokuphakelayo, ukucutshungulwa kwempahla eluhlaza, nokukhiqizwa kwenyama nemikhiqizo yobisi, uhlelo lokulawula ikhompyutha lubalulekile ekuhambeni komsebenzi okungaphazanyiswa.
I-USU Software ingumkhiqizo oyingqayizivele ohlangabezana nazo zonke izidingo zohlelo lokubalwa kwemfuyo olusebenza kahle kakhulu. Amabhizinisi emfuyo anoma yibuphi ubukhulu nobungcweti, njengezimboni ezizalisayo, amafemu amancane, amapulazi akhuluphele, izakhiwo ezinkulu zokukhiqiza, njll. Zingasebenzisa ngokulinganayo, futhi zisebenzise ngempumelelo uhlelo olunikeza ukubalwa kwemali ngasikhathi sinye kwamaphoyinti amaningi wokulawula. Ukubalwa kwezindleko kanye nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo kungagcinwa kukodwa ngokwehlukana kweyunithi ngayinye, njengesiza sokuhlola, umhlambi, ulayini wokukhiqiza, njll., Nangefomu elifingqiwe lebhizinisi lilonke. I-interface yomsebenzisi ye-USU Software ihleleke kahle futhi ayibangeli bunzima enqubweni yokuyiqonda kahle. Amasampula namathempulethi emibhalo yokubalwa kwemali yezindleko zokukhiqiza kanye nokuvunwa kwemikhiqizo eseqediwe, amafomu okubalwa kwamabhuku ezimali namatafula athuthukiswa ngabaqambi abangochwepheshe.
Amaspredishithi ahlelwe avumela ukuthi wenze izilinganiso zezindleko zohlobo ngalunye lomkhiqizo, zibalwe ngokuzenzakalela uma kwenzeka kushintsha amanani entengo yezinto zokusetshenziswa, imikhiqizo eqediwe, njll. Ama-oda wokuphakelwa kokudla, idatha yomkhiqizo wemikhiqizo evela kulayini wokukhiqiza, imibiko yezitoko zokugcina izimpahla, njll. Kusetshenziswa imininingwane yezibalo eqoqiwe, ochwepheshe benkampani bangabala amanani okusetshenziswa kwezinto zokusetshenziswa, okuphakelayo, imikhiqizo eqediwe, amabhalansi esitoko, ukuhlela umsebenzi wensizakalo yokuphakela kanye nolayini bomkhiqizo. Idatha yesivuno isetshenziselwa ukuthuthukisa nokulungisa amapulani wokukhiqiza, ukuhlanganisa ama-oda kanye nokuwaletha kumakhasimende, njll. Amathuluzi we-accounting akhelwe avumela abaphathi bepulazi ukuthi bathole imininingwane ngokushesha ngamarisidi wemali, izindleko eziphuthumayo, izindawo zokuhlala nabaphakeli nesabelomali , amandla weholo nezindleko esikhathini esinikeziwe, njll.
I-USU Software ihlinzeka ngemishini ezenzekelayo yansuku zonke nokubalwa kwemali enkampanini yezilwane, ukwenziwa ngcono kwezindleko, kanye nokwehliswa kwezindleko zokusebenza ezithinta intengo yezindleko, kukhulisa inzuzo yebhizinisi lilonke. Ukubalwa kwezindleko kanye nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo ngaphakathi kohlaka lwe-USU Software kwenziwa ngokwamafomu amadokhumenti avunyelwe umkhakha futhi ngokuya ngemithetho yokubalwa kwezimali. Uhlelo luhlangabezana nazo zonke izidingo zomthetho olawula ukufuywa kwezilwane ezithile, kanye namazinga e-IT esimanje.
Izilungiselelo zenziwa kucatshangelwa imininingwane yekhasimende, izinkambiso zangaphakathi, nemigomo yebhizinisi. Izindleko eziphindaphindwayo ziyabhalwa futhi zithunyelwe kuzinto zokubalwa kwemali ngokuzenzakalela. Isivuno semikhiqizo eqediwe siqoshwa nsuku zonke ngokusho kwemibhalo eyinhloko. Izindawo zokulawula eziningi lapho uhlelo luqopha khona izindleko kanye nokuvunwa kwemikhiqizo yemfuyo akuphazamisi ukusebenza kohlelo.
Kulinganiselwa izindleko ezibalwa ngokuzenzakalela zomkhiqizo ngamunye. Uma kwenzeka kuguqulwa izindleko zezinto zokusetshenziswa, imikhiqizo eqediwe, okuphakelayo, njll. Ngenxa yokwenyuka kwamanani okuthengisa, noma ezinye izizathu, izibalo zibalwa kabusha ngohlelo ngokuzimela. Ifomu elakhelwe ngaphakathi libala izindleko zokukhiqiza ekuphumeni kwezindawo zokukhiqiza. Ama-oda wemikhiqizo yezilwane epulazini agcinwa ku-database eyodwa.
Ukusebenza kwempahla kugcinwa kahle ngenxa yokuhlanganiswa kwamadivayisi wezobuchwepheshe ahlukahlukene, njengama-scan code bar, izikali ze-elekthronikhi, ama-terminals okuqoqwa kwedatha, njll., Aqinisekisa ukuphathwa kwempahla esheshayo, ukulawula okungenayo ngokucophelela, ukubalwa kwe-inthanethi kwezilinganiso, ukuphathwa kwempahla engenayo okunciphisa isitoreji izindleko nomonakalo kusuka kuzimpahla eziphelelwe yisikhathi, ukulayishwa kwemibiko ezilinganisweni zamanje zanoma yiluphi usuku olunikeziwe. Ukuzenzakalela kwezinqubo zebhizinisi kanye nokubalwa kwemali kukuvumela ukuthi uhlele kahle umsebenzi wokuhlinzekwa nokukhiqizwa kwensizakalo, unqume amanani okusetshenziswa kwezinto zokusetshenziswa, okuphakelayo, nezinto zokwakha, ukuhlela ama-oda nokuthuthukisa imizila yokuhamba efanelekile lapho imikhiqizo ilethwa kumakhasimende.
Ukwakhiwa nokuphrinta kwemibhalo ejwayelekile, amashidi wezindleko, amajenali okuphuma, amafomu oku-oda, ama-invoice, njll kwenziwa uhlelo ngokuzenzekelayo. Isheduli esakhelwe ngaphakathi inika amandla wokuhlela amapharamitha kanye nemigomo yokulungiselela imibiko yokuhlaziya esetha imvamisa yokwenza isipele, njll. ngaphandle kwezindleko zamanje, njll.